फर्निचरका प्रतिक: व्यवसायका हस्ती परम्परागत ढंगले चल्दै विकास हुदै नेपाली अधिकांश व्यवसायीको परापूर्व काल देखि एक आफ्नै इतिहास छ । राजनीतिक / सामाजिक साँस्कृतिक विकाससँगै हरेक व्यवसायले कला संस्कृतिसँगै परिवर्तन हुदै आएको छ । त्यो काष्ठ कलामा होस वा अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा । बदलिदो जीवनशैलीसंगै परिवर्तन हुदै आएको देखिन्छ नै । फर्निचरको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा यो एउट
यी हुन् करोड भन्दा बढि मूल्य पर्ने गाडीहरु, कुन कति मूल्यको ? काठमाडौं –नेपालमा पछिल्लो समय अटो बजारको क्षेत्र निकै अगाडी बढेको छ । यहाँ निकै महँगा करोड मूल्यका गाडीहरु समेत चढ्ने मोह कष्टुमरमा बढ्दै गएको गाडी विक्रेता कम्पनीहरु बताउँछन् । मानिसहरुको आम्दानी बढेसँगै मोटरसाइकल गाडीहरुमा मोह बढ्दै गएको जानकारहरु स्वयं स्वीकारछन् । उपभोक्ताको आकर्षणलाई मध्य नजर गर्दै विभिन्न मोडल ब्राण्डका करोडसम्मका गाडी हरु नेपाल भित्र्याइएका छन् । करोड
काँग्रेसले ल्यायो ५ वर्षमा मुलुक सम्पन्न पार्ने यस्तो सुत्रः ४१ बुँदे अवधारणा ! काठमाडौँ – नेपाली काँग्रेसले निर्वाचनपछि मुलुकलाई विकासको बाटोमा अगाडि लैजान सामाजिक एवं आर्थिक विकासको महत्वाकांक्षी मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । काँग्रेसले आज पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी मुलुकलाई पाँच वर्षमा सम्पन्न मुलुक निर्माण गर्न सामाजिक तथा आर्थिक विकासको यस्तो मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको हो । काँग्रेसको आर्थिक समृद्धि र विकास समन्वय उपसमितिका संयोजक विनोद चौधरीले
किन बन्दैछ ‘साइबर क्राइम’ नियन्त्रण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका निम्ति चुनौतीपूर्ण ? काठमाडौँ – मुलुकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रकम कम्प्युटरको माध्यमबाट गैरकानुनी ढंगले हासिल गर्नेहरुबाट जोगाउनु ज्यादै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको निष्कर्षमा ‘बैंकर’हरु पुगेका छन् । साथै उनीहरूले ‘साइबर क्राइम’ नियन्त्रण राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्ने बताएका छन् । विश्वभरको ‘बैंकिङ’ प्रणाली‘साइबर क्राइम’को चपेटामा परेको र त्यसको नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनिरहेको सन्दर्भमा मुलुकमा पहिलोपटक साइबर क्राइम र दु्रत रकम प्रवाह
प्याजको मूल्य छोइनसक्नु खुद्रामूल्य १५० सम्म काठमाडौं – प्याजको मुल्य छोइनसक्नु भएको छ । केहीदिन यता उपभोक्ताको भान्सा मँहगिरहेकै समय एकाएक प्याजको मूल्य आकाशिएको छ । प्याजको मुल्य यसरी आकाशिनुको कारण भारतको अँकुशका कारण भएको सम्बन्धित विज्ञहरु बताउँछन् । एक महिनाअघि प्रतिकिलो ७५ रुपैयाँसम्ममा प्याजको खरिद (विक्री हुन्थ्यो । यसरी एक्कासी प्याजको मुल्य बढेपछि उपभोक्तामा निराशा छाएको छ ।कालिमाटी तरकारी तथा
राष्ट्रिय गौरवका यी विमानस्थल निर्माणमा प्राथमिकता काठमाडौँ – नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गत विमानस्थलको निर्माणमा प्राथमिकता दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको स्वीकृत वार्षिक बजेट, नीति र कार्यक्रमबारे जानकारी दिन आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका महानिर्देशक संजीव गौतमले निर्माणाधीन गौतमवुद्ध विमानस्थल, पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र बाराको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि आवश्यक बजेट निर्धारण गरिएको बताउनुभयो । यी
यी हुन् तौल घटाउने घरेलु उपाय हरेक दिन बिहान तातोपानी पिउने । हरेक दिन बिहान एक गिलास लौकाको जुसमा अश्वगन्धाको पात एकदुईवटा राखेर पिउने । हरेक दिन बिहान, दिउँसो र बेलुका तातोपानीसँग अश्वगन्धाको एउटा पात राखेर पिउने । चिकुटा चुर्ण ५० ग्राम, अदुवाको धूलो, छोटी पीपल र मरीच बराबर मिलाएर ५० ग्राम चुर्ण बनाउने र त्यसमा बछेडाको बोक्रा, बोदन्ती भष्म १० ग्राम, प्रभापिस्टी